UVIMBA WE-CIDER @ BARONSWOOD. I-BOUTIQUE ESC - I-Airbnb
UVIMBA WE-CIDER @ BARONSWOOD. I-BOUTIQUE ESC
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLouise
IBoutique, inja enobuhlobo, indlu esemaphandleni kanokutsho. Ithe nca kumbindi weDevon emangalisayo ngaphezu kwentlambo etyebileyo nenamahlathi. I-Cider Barn ibuyiselwe ngothando kwaye ngoku likhaya leholide elikumgangatho ophezulu (elikhethelwe i-Airbnb Plus).
Ngena kwi-Barn kwaye uza kuziva ukhathazekile kwaye ukhathazekile njengoko iholide yakho iqala. Le yindawo enobubele apho imibala epholileyo kunye nefuthe elithobekileyo lamaFrentshi… ukusuka kwiilineni zobunewunewu ukuya kwiibhedi zakudala.
kwi-sumptuous velvet sofa kufutshane netafile enkulu yekofu ye-Oka okanye ngoxa ukude ngeyure okanye ezimbini ufunda, unzulu phakathi kweekhushini zebhedi ngosuku...
Indawo yokuhlala enobude obuphindwe kabini ivuleke kakuhle ngo-44 ’ kodwa inemigangatho ye-okhi ehlanjiweyo kunye nemiqolomba, kunye nezibane ezijongwa njengezibane; inikezela ngeendawo ezifudumeleyo nezinabantu abambalwa. I-ethanol elungele indalo ‘i-log burner' (ethi "hooray" ayidingi kucocwa) kunye namakhandlela anuka kamnandi enza uzive ukhululekile kwaye uphumle. Ihlobo okanye ubusika kunokwenzeka ukuba uzenzele eyakho i-Denmark Hygge apha embindini weDevon.
Yonwabela ukubona amahashe akumgangatho wehlabathi njengoko ekhokelwa kukufuya ngaphaya kwe-paddocks. Kwaye kumxholo wemilenze emine... asikaze silibale ukuba eyona ndoda ikuthanda ukukhe athathe ixesha lokuphuma aze anqumamise ukuze kubekho ibhedi enkulu netofotofo yenja (uyilo luye lwazanywa ngokupheleleyo lwaza lwavavanywa ziindawo zethu eziyi-4 eziqondayo).
I-Cider Barn isenokuba yeyona inzulu, ayinanto yakwenza ne-Devon kodwa iyonwabela I-WIFI ekhawulezayo kakhulu, i-Beats Pill, irediyo ye-DAB, i-Amazon, i-Freeview TV kunye ne-DVD (kunye neefilimu ezininzi). Nangona kunjalo, ukuba ukhetha indlela yokuzonwabisa ngeholide yakho, kukho iincwadi ezininzi onokukhetha kuzo, imidlalo yebhodi kunye nobomi beentaka obumangalisayo. Njengoko ilanga liqala ukutshona usenokubona nexhama lasendle emasimini okanye i-hare okanye ezimbini.
IKHITSHI kunye nendawo YOKUTYELA I-Cider Barn ine-baspoke, ikhitshi elenziwe ngezandla kunye nezona ndawo zimnyama zomsebenzi we-grey slate ezibekwe phambi kweFarrow &
Ball 's Purbeck stone emnandi. Kukho into enkulu yokupheka ii-hob ezintandathu, ifriji, i-microwave, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba impahla, i-Nespresso, i-Dyson Animal njl njl. Le ndlu inamachiza, iziqholo, ioyile, iidiliya nezinye izinto ezifunekayo ekhitshini.
Ikhitshi linetafile epholileyo nesesidlo sakusasa, ejonge i-ménage apho iqela elikufutshane le-Baronswood Equestrian liphuka khona-ukuya kumahashe amancinci okugqoka. Indawo yokutyela eyahlukileyo nesesikweni yokutyela ixesha elide, epholileyo ingaphaya kwe kunye nezihlalo eziyi-6.
kwi-Cider Barn, endaweni ekhethekileyo, iyakwazi ukungena ngqo egadini ukusuka phantsi ukuya kumgangatho wokuqala (yakhelwe kwinduli yentlambo). Amagumbi okulala amabini acocekileyo nawenziwe ngabanye alindele kumgangatho osezantsi...
Inkosi enamagumbi aliqela inebhedi entle netofotofo, enkulu enamashiti acocekileyo nesofa yakudala yaseFransi. Ifestile enkulu elala abantu ababini ivula ngaphandle xa ubona ibala elibaleleyo. Kukho igumbi elimanzi elineshawa emvula kunye nezinto zokuthambisa zaseMolton Brown.
Igumbi lesibini linezinto zakudala ezimbini ezihonjiswe kakuhle, iibhedi zaseFransi ezilala umntu omnye, itafile esecaleni kwebhedi yaseGustavian, iwardrobe epeyintiweyo kunye neminyango ekhokelela kwigadi yendlu esemaphandleni entle kakhulu yaseCider Barn. Yindawo entle yokuhlala uze wonwabele ikofu yakho yasekuseni uze ujonge enoba izimbali zamanzi zicinga ngokuphuma emini.
Kukho igumbi lokuhlambela losapho elinendawo yokuhlamba emnandi nelizimeleyo ukuze uzipholele emva kosuku uhamba ngeenyawo kwi-Dartmoor okanye abantwana badlale entabeni yeebhabhatyi.
Ukuba kukho ngaphezulu kwezine kuni, ibhedi yosuku ekuthiwa yiLoaf ekwindawo yokuphumla itshintsha ibe ziingxowa ezimbini ngeliso ibe ziingxowa zeendwendwe ezintle ibe iibhegi zokulala zangaphakathi zithetha ukuba yonke into ingakhutshwa kwimizuzu nje embalwa.
Kwintwasahlobo nasehlotyeni ngo-2021, kuza kubakho intente enentsimbi ephucukileyo ekwigadi yeCider Barn eneebhedi ezimbini, iiduvethi... ukwenzela xa kunokwenzeka naziphi na iindwendwe zethu (okanye abantwana bazo) zifuna ukuzonwabisa kancinci/zimamele abantu abangalaliyo.
IBHAFU ENAMANZI ASHUSHU EYENZIWE NGAMAPLANGA
Kunyanzelekile ukuba ungene kwibhafu enamanzi ashushu eyenziwe ngeenkuni zaseSweden. Hlamba ngaphantsi kweenkwenkwezi ngeglasi ye-fizz, ukukhanya kwekhandlela kunye nokuqhekeka komlilo we-Birch. Le bhafu enamanzi ashushu ayinazo iikhemikhali ibe ayiphelelanga ekusebenziseni umbane... ngoko yindawo entle kakhulu kuwe, indalo (kunye neCrangeas yethu ezuza emanzini). Ibhafu iza kugcwala ngokutsha, ilayite umlilo, ize ifakwe kwiqondo lobushushu elihle yi-Baronswood fairies. Uvele nje ubazise ukuba ungathanda ilungele ixesha elingakanani. Iigawuni, iitawuli zeHamman, iifleshi ziyafumaneka,
iCider Barn inegadi yendlu esemaphandleni entle enechibi elincinci elihonjisiweyo, ibhafu enamanzi ashushu kunye neendawo zokuhlala ze-bistro.
Kukho itafile enezihlalo eziyi-4 kwangoko ngaphandle kovimba kunye nento yokufudumeza iveranda.
Igadi endala inendawo yokutyela yesibini, i-shabby chic alfresco eneendawo zokuhlala iintsuku eziyi-6. Yonwabela iziselo zangokuhlwa kunye nomngxuma womlilo, izibane ezitshayo, amalahle kunye neendawo zokoja zegesi kunye neoveni ye-Ooni Koda pizza (kumnandi kakhulu).
I-Cider Barn inendawo ye-paddock (ingathi ingengengca) elungele abantwana ukuba bahambe nge-steam. Ikwanazo neendawo ezimbini zokutyela ilanga kwaye kukho indawo yesibini enendawo yokutyela ilanga enye. Zonke iigadi zijongene noMzantsi.
abuke Inqolobane ineentlanzi, iambrela, iibhatyi zakhe ezinde ezingangenwa ngamanzi, imethi yepikiniki, izixhobo zepikiniki kuquka ukutya neziselo.
Kukho ikhothi yokuhamba, amashiti, ibhegi yokulala (iinyanga eziyi-18-36), isitulo esiphakamileyo, izitya zedinala, imethi yokutshintsha, indawo yokudlala, isitulo sokuhlamba, izinto zokuthambisa zabantwana. Kukho nebhedi esongwayo kwigumbi lokulala elikhulu ukuba kuyimfuneko.
YEENDWENDWE ZETHU EZINE EZINEMILENZE
Uvimba uneekreyiti (ubukhulu obahlukahlukeneyo), ibhedi yenja, iingubo, iitawuli zeenja, izinto zokosula izinja, izitya, izimuncumuncu, ukubophelela ngaphandle, isitebhisi, izinto zokogquma isofa, umhlobo wodaka, ukudibanisa abantu abakhokelayo.
Uvimba unkungu kabini ngaphambi kokufika kwakho.
4.99 · Izimvo eziyi-202
I-Devon engaphelelwa lixesha, yasemaphandleni... iindledlana zasemaphandleni, ezibetha umoya kunye nendawo entle yokuyibuka.
I-Cider Barn isetwe phakathi kweedolophana zakudala zaseZeal Monachorum kunye neNorth Tawton kwaye yinxalenye yeBaronswood Manor enembali eya ku-1492.
Nangona usenokungafuni ukushiya indawo entle yasemaphandleni ekuthiwa yi-The Cider Barn, ilungele ukubuka iDevon neNorth Cornwall. Yindawo apho unokunamathela khona ipin kwimephu uze ubuze… “Siza kuya phi namhlanje?”
Indlela eya eDartmoor… eOkehampton, ikude ngeemayile eziyi-8. Ijuwelari eyaziwayo yePaki yeSizwe, iChagford, kunye neebhari zayo ze-gastro kunye nee-boutique, ikumgama wemizuzu eyi-20 ukuya kwiindlela ezithile ze-idyllic (yindawo entle yokonwabela isidlo sasemini ukuba uye watyelela iNqaba ye-National Trust Drogo).
Yiya empuma ukuze utyelele iRHS Rhosemoor okanye ubuhle obungaphelelwa lixesha beClovelly okanye ubuncwane obufana ne Woolacombe okanye iCroyde kunxweme lwaseNorth Devon. Ukuba unqamule i-Dartmoor National Park ungaphoswa yi-Salcombe ehamba phambili, ubone izikhephe e-Dartmouth okanye mhlawumbi uthathe izinto zakudala kwidolophu entle yase-Ashburton.
I-Exeter sisixeko esihle saseRoma esikufaneleyo ukutyelelwa ukuba uza konwabela isidlo sasemini esibheke iCathedral eluhlaza.
I-Cider Barn ilungiswe kakuhle kangangeentsuku ezingalibalekiyo eCornwall ukuya eBude nase-NT Sandymouth (imizuzu eyi-55), ePadstow (imizuzu eyi-55), eBoscastle okanye eTintagel (imizuzu eyi-60), ePort Issac (imizuzu eyi-75), ePadstow (imizuzu eyi-90).
Welcome to The Cider Barn at Baronswood House. Baronswood House is our lovely, peaceful country home. As a show producer of 30 years (rather a hectic life)... I love the tranq…
Sihlala kwisayithi ngoko siza kuba lapha ukukwamkela.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bow